Guddiga doorashada guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland oo la doortay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddiga doorashada guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland oo la doortay
Guddiga doorashada guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland oo la doortay
Garoowe (Halqaran.com) – Kadib markii Khamiistii maanta Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland xilkii ay ka qaadeen Gudoomiyihii Baarlamaanka Maamulkaasi, ayaa waxaa la magacaabay Guddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulkaasi.
Guddoomiye ku-xigeenka ahna ku simaha Guddoomiyaha Baarlamanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo qaban-qaabin doona doorashada guddoomiyaha golaha Wakiilada Puntland.
Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Puntlamd ayaa sheegay 14ka Bishan oo ku beegan maalinta Khamiista inay dhici doonto doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Guddigan ayaa ka shaqeyn doono hawlaha kala duwan ee doorashada iyo Shuruudaha laga doonaayo qofka isku soo sharaxaya xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Ilaa iyo hadda guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin ayaanan wali si toos ah uga hadlin xil ka qaadistii maanta lagu sameeyay.
Gudiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Puntland